ठेला’मा मःमः बेच्ने गा’यक ठेला बेचेर रुदै देश छो’ड्दै ! बानेश्वर चो’कमा मध्यरातमा यस्तो घट’ना घटेपछि आत्तिए- हेर्नुहोस (भिडियो सहित ) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/ठेला’मा मःमः बेच्ने गा’यक ठेला बेचेर रुदै देश छो’ड्दै ! बानेश्वर चो’कमा मध्यरातमा यस्तो घट’ना घटेपछि आत्तिए- हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
ठेला’मा मःमः बेच्ने गा’यक ठेला बेचेर रुदै देश छो’ड्दै ! बानेश्वर चो’कमा मध्यरातमा यस्तो घट’ना घटेपछि आत्तिए- हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
काठमाण्डौ- नेपालमा सम्भावना नदेखेर, बिविध समस्यामा परी लाखौं नेपाली दाजुभाई र दिदी बहिनी आज पनि बिदेशिदै छन् । लाखौंले बिदेशी भुमिमा रगत पसिना बगाउंदै आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुखद भविष्य खोज्दैछन्, बिदेशी भुमिमा अनेकौं दुख पिडा भोग्दै नेपाल आमालाई सम्झेर रुदैछन् ।
बिदेशिएका सबैले नेपाली र नेपाली भाषीलाई हाम्रो सम्झना यता ठेलामा मम बेच्ने गायक कपिल पौडेलको कथा अलि बेग्लै छ । ठेलामा मम बेच्ने गायक भनेर चिनिएका कपिल पौडेल । जो आफ्नो गायक बन्ने सपना पुरा गर्न व्यस्त शहर काठमाडौंमा आए, अनि अनेक हन्डर खाए ।
काठमाडौंमा बसेर गायक बन्ने त कता हो कता बाच्नसम्म पनि गाह्रो भएपछि बानेश्वर चोक नजिक अनामनगर जाने बाटोमा ठेलामा मम बेच्न थाले । राति राति मम बेचेर कमाएको पैसाले संगीत कक्षा लिन थाले अनि सबैको साथ सहयोगले एउटा गीत गाएर भिडियो पनि निकाले, साला काठमाडौं ।
गीतले भने जस्तै काठमाडौंमा उनलाई झनै गाह्रो पर्न थाल्यो । देशमै केहि गर्छु, सफल गायक बन्छु भनेर कुनै पनि काम गर्न लजाउनु हुंदैन भनेर ठेलामा मम बेच्न थालेका कपिलले अब आफ्नो ममको ठेला बेचेर देशै छोड्न लागेका छन् । काम गरेर खान्छु भन्नेलाई पनि देशमा कमाई खाने वातावरण भएन ।
ठेलामा मम बेचेर घरभाडा, संगीत कक्षाको शुल्क तिर्न र खान लाउन त गाह्रो थियो नै, अहिले आएर उनको कमाई खाने बाटो नै खोसिने भएपछि कपिल देशै छोडेर बिदेशमा गई रगत पसिना बगाउने सोचमा पुगे ।
देशमै बसेर आफुले जानेको काम गर्दै सफल गायक बन्छु भन्ने कपिलको जीवनमा के त्यस्तो घटना घट्यो र उनले रुदै दशे छोड्न लागे, ।पुरा भिडियो हेर्नुहोला ।..